Ahoana ny fomba hamoronana Hot Spot (Hotspot) tsotra sy miasa amin'ny Linux? | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hamoronana Hot Spot (Hotspot) tsotra sy miasa amin'ny Linux?
Na inona na inona «Sistema Operativo» mety apetraka amin'ny sasany Solosaina (birao, finday na solosaina finday)amin'ny fifandraisana tariby sy tariby, azo antoka fa amin'ny fotoana sasany ny mpampiasa / tompony dia te-hamorona / manamboatra a «Punto de acceso caliente», izany hoe, a «Hotspot» momba azy. Ary araraoty ny fizarana ny Fifandraisana amin'ny Internet tariby amin'ny alàlan'ny tamba-jotra tsy misy tariby miaraka amin'ny fitaovana hafa.
Na ahoana na ahoana, na amin'ny «Windows, MacOS o Linux» azonao atao a «Hotspot» Vía Command Line Interface (CLI), izany hoe terminal na console. Na izany aza, ao amin'ny «Windows y MacOS» Betsaka ny rindranasa amin'ny antoko fahatelo mamela anao hamorona a «Hotspot» amin'ny fomba tsotra sy miasa amin'ny alàlan'ny Graphical Interface (GUI). Amin'ny «Linux» tsy be dia be izy ireo, fa afaka mamorona iray mora foana ianao amin'ny «Gestor de conexiones de red» an'ny tsirairay avy «Entorno de Escritorio».
Voalohany, alao ao an-tsaina fa a «Punto de acceso caliente o Hotspot» raha ny marina izany a fidirana fandrakofana atolotra amin'ny alàlan'ny fitaovana iray ka misy a fifandraisana tsy misy tariby, tsy misy tariby, izany hoe amin'ny alàlan'ny Fifandraisana WiFi, manolotra indrindra Fifandraisana amin'ny Internet, na loharano sy serivisy hafa amin'ny alàlan'ny tambajotra eo an-toerana (LAN) o tambajotra nasionaly na manerantany (MAN / WAN).
Ary faharoa, ny fomba fiasa dia mety miova kely arakaraka ny anisany «Entorno de Escritorio» (Gnone, Plasma, KDE, XFCE, kanelina, mate, ankoatry ny hafa) ampiasaina amin'ny azy «Distro GNU/Linux».
Ho an'ny tranga misy ny lahatsoratray dia hampiasa a «Laptop» miaraka amin'ny CPU 3 Core Intel i4 sy RAM 6 GB ary ny «Distribución MilagrOS GNU/Linux 1.2» miaraka amin'ny «Entorno de Escritorio XFCE» ary ny «Gestor de conexiones de red» ny mitovy, antsoina «Miniaplicación Gestor de la red», izay mitantana ny NetworkManager ampiasaina koa amin'ny GNOME.
1.1 Dingana 1
1.2 Dingana 2
1.3 Dingana 3
1.4 Dingana 4
Sokafy ny «Gestor de conexiones de red» an'ny azy «Distribución GNU/Linux»:
Fangatahana amin'ny «Gestor de conexiones de red» manampy vaovao «conexiones de red» to the «Distribución GNU/Linux» ampiasaina:
Lazao ny «Gestor de conexiones de red» fa ilay vaovao «conexiones de red» dia ho karazana «Inalámbrica»:
Amboary ny masontsivana ny vaovao «conexiones de red»:
Ao amin'ny kiheba antsoina «Inalámbrica» amin'ilay fikandrana vaovao antsoina hoe «Editando Conexión inalámbrica 1» Ireto saha manaraka ireto dia tsy maintsy nofenoina toro-hevitra naroso tsirairay avy:
Anaran'ny fifandraisana: Hotspot (Na ny iray amin'ireo safidinao)
SSID: Hotspot (Na ny iray amin'ireo safidinao)
Mode: Hotspot na Access Point
Channel: efa voafaritra mialoha
Fitaovana: Wlan0 (Na ilay misy)
Ao amin'ny kiheba antsoina «Seguridad inalámbrica» Ireto saha manaraka ireto dia tsy maintsy nofenoina toro-hevitra naroso tsirairay avy:
fiarovana: WPA sy WPA2 Personal
Contraseña: Hotspot * 2019 (Na ny iray amin'ireo safidinao)
Ary ao amin'ny kiheba antsoina «Ajustes de IPV4» Ireto saha manaraka ireto dia tsy maintsy nofenoina toro-hevitra naroso tsirairay avy:
fomba: Nozaraina tamin'ny ekipa hafa
Ny sisa dia ny manindry ny bokotra antsoina «Guardar» hamita ny fanaingoana ary miroso amin'ny fitsapana ny «Punto de Acceso» o «Hotspot». Tsarovy fa raha ny solosaina amoronako ny «Hotspot» manana ny azo ampitaina ihany, tsy hampiseho fifandraisana tonga avy «Wi-Fi» hita sy misy. Raha vantany vao tapaka aminy ianao dia ho hitanao ny «Redes inalámbricas», araka ny aseho etsy ambany:
Farany fa tsy farany, tadidio fa na dia efa afaka mifandray amin'ny «Hotspot»tsy manome antoka anao izany fitetezana Internet, satria io dia mety miankina amin'ny anton-javatra hafa amin'ilay karazany «Enrutamiento», noho ny zavatra hafa, na mifandray mivantana a na tsia ilay solosaina «Módem», un «Módem/Router», «Router» o «Red local empresarial», ary ny fomba itantanana ireo fifandraisana ireo (ny fifamoivoizana) amin'ny tambajotra.
Araka ny hitanao, mamorona tsotra sy miasa «Hotspot» mampiasa tera-tany «Gestor de conexiones de red» an'ny azy «Distribución GNU/Linux» Tsy zavatra mitaky fahalalana be loatra na avo lenta. Fa raha te hanandrana fampiharana rindrambaiko ivelany ianao dia manasa anao hahalala «Wicd» y «WiFi Hostapd AP». Ity farany, manana ny tahiry ofisialiny LaunchPad. Ary raha te hanandrana fomba hafa ianao dia avelanay aminao ity rohy ofisialy ity amin'ny lohahevitry ny tranokalan DEBIAN GNU / Linux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fomba hamoronana Hot Spot (Hotspot) tsotra sy miasa amin'ny Linux?
PICCORO Lenz McKAY dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara .. ary .. ABAWIFICANTV ?? Venezoeliana no hita! XD
Tsara ny milaza amin'ny antsipiriany fa (na dia resahinao aza io, lazaiko amin'ny antsipirihany) ny zava-misy fa mahatonga ny antena Wi-Fi anao ho toy ny fampielezana Wi-Fi ho an'ny milina hafa .. angamba misy sary kely ..
Valiny amin'i PICCORO Lenz McKAY
davidochobits dia hoy izy:
Fidirana tsara. Mety ho tsara ny manazava ireo dingana mitovy avy amin'ny console console, izay amin'ny farany dia manome fampianarana bebe kokoa, farafaharatsiny amin'ny fomba fijeriko.
Mamaly an'i davidochobits
Aprilio dia hoy izy:
Tena ilaina. Nitady fomba hamerana ny bandwidth an'ny Skype amin'ny finday aho. Amin'izany fomba izany, mametra ny fantsom-pifandraisana izay mandalo ny fidirana amin'ny solosaina aho.
Valiny tamin'i Aprilio
Miarahaba, Aprilio! Faly aho fa nanampy anao io.
hector zamudio dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao nampatsiahy ahy ireo dingana tokony harahiko hamoronana teboka iray, dia manadino foana aho hehe
Mamaly an'i hector zamudio
Herinandron'ny lalao: inona no vaovao amin'ny Linux
PayPal, Visa, MasterCard dia afaka mandinika indray ny vola virtoaly Facebook, Libra